Sidaas wadatashi badan ka dib markii aad ayaa ugu danbeyn go'aansaday in ay tahay waqti ay ku ganacsadaan ee hore iPhone iyo tayeynta in version a cusub. Doorashada u fiican, laakiin taas micnaheedu aad si fudud u socon kartaa in aad ka ganacsada ee kuugu dhow, gacanta hore iPhone, bixiso lacagta iyo guriga keeno qalab cusub?
Gabi ahaanba maya! Just ka fekeraan dhammaan xogta aad ku kaydsan ee qalab jir. Waxaa jiray waqti markii ay wax ka kuugu dhow lahaa saaxiib ah oo aad u dhiibtay wax walba. Maxaa dhacaya haddii dhammaan this macluumaad xasaasi ah ku dhammaadaan in gacmo khalad ah?
Si loo badbaadiyo naftaada dhibaato, waxaa lagu talinayaa in aad tirtirto xogta aad ka hore iPhone oo dhan ka hor inta kibirsan aawadeed dhawaaqay iibka ah ee model ugu dambeeyay. Ka hor inta aan kuu sheego sida ay u tirtirto xogta aad, aad u baahan tahay in Mudanayaasha sir ah sida uu ku waajibinayo saaraha iPhone, Apple.
Halkan waxa ku jira talaabooyin aad u baahan tahay in la raaco.
Raac Settings> habayn jidka ku saabsan qalabka iPhone jir.
Tuubada habayn shid button.
Qalabka aad ku dhaliyay doonaan in ay galaan habayn ah. Waxaad u baahan doontaa in ay dib-u-galaan ujeeddooyin xaqiijin. Oo sidan, aad habayn hadda karti.
Sadarka ugu dambeeya ee bogga waxaad ka heli waa war ilaalinta xogta waa in karti.
Marka taasi la sameeyo, ka hor aad tagi kartid iyo masixi dhammaan xogta. Kuwanu waa waxyaalaha u baahan in la sameeyo si ay arrintaas.
Calan gurmad ah
Ka hor inta aadan u tirtiri soo baxay xogta oo dhan, si loo hubiyo in aad iPhone oo taageeray si aadan lumin wixii xog ah iyadoo la beddelo qalab aad.
Raac Settings> iCloud> Kaydinta & kaabta Jidka.
Waxaad arki doontaa wax a biiro calaamadeeyay kaabta iCloud oo aad u baahan tahay si ay u noqon on. Degdeg ah A idiin muuqan doonaa ka digay in telefoonka maayo toos ah oo taageeray in your computer. Tubada on okay soco.
Marka kaabta iCloud la socda, tuubada ee kaabta Now. habka xogta gurmad ah Tani waxay ku bilaaban doono ka iPhone in iCloud.
Haddii aad isticmaalayso kaabta iCloud, wax deletions Buuggan waxaad ka dhigi doonaa kale oo ey isku saaro xogta xoojiyaa. Sidaas hubiyo in aadan baab'iyo sawiradiisii, xiriirada, ama macluumaad kale oo muhiim haddii aad si ula kac ah u samayn.
Dooq kale oo iCloud waa Lugood iyo wuxuu si gaara faa'iido u ah kuwa la shaqeeya xidhiidhka la leh internet gaabis ah. Iyadoo Lugood, waxa kale oo aad ka heli in gurmad barnaamijyadooda iyo dhammaan content la xiriira. Intaa waxaa dheer, waa meel aan xad lahayn duwan la iCloud halkaas oo ay tahay inaad bixiso ka dib markii 5 GB ee lagu kaydiyo lacag la'aan ah uu kor u buuxsantay.
Fur Lugood iyo dooro iPhone button dhinaca gacanta midigta ee kore.
Sida toos ah dib doorasho ay doortaan gurmad sir iPhone . Calan sir ah u gurmad Lugood, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah macluumaadka xasaasiga ah la jira liiska.
Haddii aad kor u taageerto xogta la isticmaalayo gurmad ah hab buugga, guji Gacanta Back Up iyo Soo Celinta ka dibna dooro Back Up Hadda doorasho u bilowdo hawsha. Tani waa markii nidaamka cunaysa si loo xaqiijiyo in aad daqiiqo in ay ku qaataan sida loogu baahan yahay.
Marka dhammaan xogta lagama maarmaanka ah ka barnaamijyadooda default ayaa la xoojiyaa, waxaa laguu keenay in doonaa oo ku saabsan taageero aad iibsadaan. Tani waxay muhiimad taageeray ilaa barnaamijyadooda ku rakiban oo ay la socdaan macluumaadka ay. All inaad samayso waa in la saxiixo ID Apple aad tahay geeddi-socodka si aad u hesho socda.
Hadda oo xogta oo dhan waa la xoojiyaa, ka hor aad tagi kartid iyo xogta aad tirtirto.
Riix Settings> General> celi.
Waxaa jiri doona fursado badan oo resetting xogta horay u badbaadiyey. Haddii aad dooneyso in aad tirtirto wax walba, dooro masixi All Content iyo Settings.
Waxaa jiri doona dhakhso ah u soo galaya aad habayn. Tani waxay la soo xigi doona digniin ah in dhammaan warbaahinta iyo files xogta ayaa hadda la tirtiro. Tubada ku masixi button labada dhacdooyin.
Haddii Raadi My iPhone Adeegyada waxaa u suurta aad iPhone, waxay keeneysaa in aad password ID Apple. Waxaa fiican in la qabto goob sida ku qiyaastaan ​​ayaa wax ku ool ah anti-xatooyada.
Marka aad haysato iPhone cusub, xogta xoojiyaa la soo celin karin ka Toostaan ​​iCloud ama Lugood kaydinta.
Inkasta oo inta badan taasi waa sida inta badan dadka dib ilaa xogta ay iPhone, waxa uu leeyahay tiro ka mid ah khasaaraha. First of dhan, nidaamka waa mid aad u dheer oo waliba si aad ah waqti, gaar ahaan marka aad la shaqaynayso xiriir ah oo internet gaabis ah. Intaa waxaa dheer, waa tiro ka mid ah sirta ah inaad xasuusato. Haddii aad mid ka mid ah illoobin, waa in aad dib wax walba oo guuleysatey ka xoq.
Markaas waxaa jira arrinta files tirtiray. In ka badan waqtiga lagu jiro oo aad iPhone isticmaalo, waxay u badan tahay in aad tirtirayaa qaar ka mid ah macluumaadka. Xogtan ma aad si joogto ah la tirtiro; dhab ahaantii, waxaa jira noocyo kala duwan oo ah software ka soo baxay waxaa loo isticmaali karaa in dib u soo ceshano macluumaadkan. Tani waxay aad u tago xaalad dheg fog sida gaarka ah ka welwelsan tahay.
Si joogto ah masixi aad iPhone isticmaalaya Wondershare SafeEraser
A kale oo ammaan ah iyo in ka badan oo macne ahaan lahayd in ay isticmaalaan Wondershare SafeEraser codsigaaga tirtiro xogta ku saabsan iPhone. Waxay leedahay tiro ka mid ah sifooyinka gaar ah oo aad marna masixi karin aad hadda, gaarka ah iyo sidoo kale xogta hore loo tirtiray.
Waxaad ka soo dejisan kartaa halkan aad PC ama Mac.
Wondershare SafeEraser waa mid ka mid ah codsiyada ugu amaan oo aad ka heli kartaa tirtirka xogta ku saabsan iPhone. Download oo isla markiiba loo soo dajiyo iyo la aw naftiinna in ay jiri doonaan halis badan oo ah tuugada xogta ka dhacaya aad iPhone ay mutaan in gacmo khalad ah lahayn.
Ina keena aynu si deg deg ah eegno talaabooyinka Hawlgelinta la tirtiro ama tirtiro aad iPhone si joogto ah la isticmaalayo Wondershare SafeEraser.
Talaabada 1: Marka aad soo bixi iyo codsiga SafeEraser ku rakiban, uu u bilaabi dooro ikhtiyaarka ah oo dhan masixi Data interface ka ugu weyn.
Talaabada 2: Nooca in ereyga 'tirtirto' si loo xaqiijiyo in aad go'aanka iyo bilowdo hawsha ee tirtiro iPhone.
Talaabada 3: Hadda, si fudud aad u leeyihiin in ay dib u fadhiisan oo ha codsiga sameeyaan ay shaqo. Waxaad arki doonaa shaashadda ah sida hoos ku qoran in la siiyo ku tusi doonaa horumarka habka tirtiro ah.
Talaabada 4: SafeEraser Wondershare badan ka qabtaa nidaamka oo dhan tirtirka joogtada ah ee aad iPhone ay u gaar ah. Marka geedi socodku waa dhamaystiran, waxaa xaqiijin doonaa in fariin soo bandhigay ay screen sida kaaga muuqata sawirka hoose siiyo.
Masixi iPhone joogto ah Video Tutorial
Sida loo joogto ah oo cad Browser History ka iPhone ah
Sida loo Delete / Clear Cache iyo Kukiyada 1 Click
> Resource > masixi > Sidee Waxaad masixi iPhone ah joogto ah?